Dalka Australia Oo Soo Bandhigay Diyaarad Samaysay Duulimaadkii ugu Wakhtiga Dheerra Abid – KHAATUMO NEWS
Shirkad duulimaad oo laga leeyahay Australia laguna magacaabo Qantas ayaa ku guuleysatay lambarka duulimaadka ugu waqtiga dheer Caalamka ee aan kala joogsiga lahayn.
Duulimaadka ugu mudada dheer ilaa iyo hadda ayay tijaabisay diyaaradda Shirkadani,waxaana saarnaa intii lagu guda jiray mudada tijaabada 49 Ruux oo iskugu jira Madaxda Shirkadda,Cilad-bixiyeenno heer caalami ah,Cilmi-baarayaal ka kala socday dunida caalamka iyo Saxafiyiin.
Diyaaradan oo u kala goosheysay Magaalooyinka New-York ee dalka Mareykan ah iyo Sydney ee dalka Australia ayaa hawada ku jirtay 19 Saacadood iyo 16 Daqiiqo oo xiriir ah,waxa ayna waqtigaas ku jartay masaafo dhan 16 Kun iyo 200 oo KM sida lagu sheegay warkooban oo la soo dhigay Bogga ay Shirkadu ku leedahay Baraha Bulshada.
Habeenimadii Jimcaha ayay ka duushay garoonka diyaaradaha John F. Kennedy ee New York iyadoona subixii Axadda ka dagtay garoonka diyaaradaha Kingsford ee Sydney waxaana xusid mudan in Waqtiga Sydney ee dalka Australia uu 15 Saac ka horreeyo waqtiga New-York ee Mareykanka.
Inta uusan dhammaan Sanadkaaan aan ku jirno ee 2019-ka Shirkadda Qantas ee Australia ayaa qorsheynaysa in ay sameyso labo duulimaad oo lagu tijaabinayo badqabka duulimaadka ugu waqtiga dheer Caalamka.
Previous Post: War Deg Deg Ah:Ismaamulka Tigree-ga Oo Shaaciyay War Ka Nixiyay Raysal Wasaare Abiy Axmed,
Next Post: Daawo:”Waan ilmeeyay Markan Arkay Taalooyinka Muqdisho’